JobsBoard - Site
အထက်ပါ Position အားစိတ်ပါဝင်စား၍လျှောက်ထားလိုပါက [email protected] (or) [email protected] သို့ CV Form ကို mail ပို့၍လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
အထက်ပါ Position အားစိတ်ပါဝင်စား၍လျှောက်ထားလိုပါက [email protected] (or) [email protected] သို့ CV Form ကို mail ပို့၍လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားလိုပါက မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ၊ မင်္ဂလာဈေးသစ်ဝန်းအတွင်း
Then send your email to [email protected] , [email protected] and tell us why:
Interested candidates drop your resume to [email protected]
Interested candidates drop your resume to [email protected] or call 09765403895.
Interested candidates, drop your resume to [email protected] call 09-765403895.
Report to and work with the Production Manager on day-to-day operations of the video department
Interested candidates please send your resume to [email protected], or call
· ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းများကို သိရှိနားလည်ပြီးလိုက်နာရပါမည်။
. မိမိတာဝန်ယူသောမော်တော်ကားနှင့်ပတ်သတ်ပြီး အလုံးစုံတာဝန်ယူလိုစိတ်ရှိရပါမည်။
· အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
- အသက်​ ၂၀မှ ၂၈ နှစ်အတွင်းဘွဲ့ရဖြစ်​ရမည်
- သက်​ဆိုင်​ရာလုပ်​ငန်းအ​တွေ့အကြုံအနည်းဆုံး ၂နှစ်​ရှိရမည်​
- Computer Advance Excel ကျွမ်းကျင်​စွာအသုံးပြုနိုင်​ရပါမည်​
- Data များ Collect လုပ်​ပြီး သတ်​မှတ်​ချိန်​အတွင်း Report ​ပေးနိုင်​ရပါမည်​
- Sales Dept; အတွက် Sales နှင့်ပတ်သက်သောData များကို analysis လုပ်ရပါမည်
လျောက်ထားလိုပါက [email protected] သို့ CV များ mail ပို့ပြီးလျောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက
09-765403895 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Minimum 2-year related field experience
Strong post-editing skills
Relative fitness to work long hours
Proficiency with editing software such as Adobe Premier Pro, Adobe After Effects, Photoshop and related software
Edits video for in house and advertisers’ videos
Creating video storyboard as per requirement
Photo shooting and retouch
Interested candidates please send your resume to [email protected] or call 09-765403895.
Associate Finance Director (M/F)
Interested candidates drop your resume to [email protected] or call 09-765403895.
Interested candidates, please send your resume to [email protected], [email protected] or call 09-977459619.
Must have related work experience in minimum3years
Interested candidates please send your resume to [email protected] or call
Building (C) ,6 floor, Shwe Pyae Sone Market, Mingalar Taung Nyunt Township,Yangon or [email protected] သို့ CV များ mail ပို့ပြီးလျောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက 09-765403895 (Viber) သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
No record yet! more listings coming soon...